सिमी संग सलाद
खाद्य र पेय पदार्थ, सलाद
Nutritionists आहार मा समावेश गर्न सल्लाह सिमी को भोजन यो दस स्वस्थ खाद्य पदार्थ को सूचीमा समावेश गरिएको छ, सकेसम्म धेरै। उदाहरणका लागि, सिमी र मधुमेह लागि उपयोगी लागि। खाना मात्र सेम बीउ तर कोसा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो खाद्य उत्पादन को उच्च मूल्य यो स्टार्च, समावेश गर्ने हो खनिज, भिटामिन, प्रोटीन र एमिनो एसिड। प्राकृतिक एंटीओक्सिडेंट, नङ, छाला र कपाल को राम्रो अवस्था कायम राख्न मद्दत गर्छ जो - यो भिटामिन ई को धेरै समावेश किनभने सिमी पनि आकर्षक छन्। को कोसा विषालु पदार्थ समावेश भएकोले तिनीहरूले कच्चा खान छैन। प्रोटिन सिमी राम्रो अवशोषित। यो यस्तो lysine, उत्तेजक tyrosine र एमिनो एसिड रूपमा अत्यावश्यक पदार्थ पाइन्छ। खाना पकाउने समयमा यी पदार्थ शायद गुमाए, र क्यान्ड फारममा खनिज को असी प्रतिशत सम्म खुलिरहेको छ। सिमी पहिलो र दोस्रो पाठ्यक्रम, साथै सलाद को एक किसिम रूपमा पकाएको गर्न सकिन्छ।
तपाईं सिमी एक सलाद बनाउन अघि, एक समयको लागि सोख गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि पानी भोकमरी छ। त्यसपछि, यो सिमी एक विस्तृत पैन मा राखिएको हो, चिसो पानी मा खन्याइन् र एक बारेमा र आधा घण्टा उसिनेर। नुन यो पकाउने अन्त अघि हुन आवश्यक छ। पानी धेरै खन्याउन आवश्यकता छैन, यो सिर्फ सिमी कवर गर्नुपर्छ। सुकेको सिमी को पकाउने लागि लामो समय लिन, तर मुख्य पकवान वा समर्थित सिमी एक सलाद पकाउन धेरै सजिलो छ - स्वादिष्ट र स्वस्थ पकवान केही मिनेटमा सिर्जना भएको छ। क्यान्ड सिमी पाठ्यक्रम एकदम पकाने को समय कम गर्न सक्छ, तर स्वाद अझै पनि घरमा तयार कमसल छ। सिमी दुवै चिसो र तातो मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक कप मा तेल संग जैतून, कटा टमाटर र जडीबुटी, गरम सिमी र सिजन राखे।
सिमी संग सलाद ती मानिसहरू वजन गर्न चाहने लागि धेरै उपयोगी छ भन्ने थाहा छ? उत्पादन को प्रोटिन सामग्री अनुसार मासु लागि वैकल्पिक छ, तर यसको पोषण मूल्य बाबजुद, सिमी बोसो जम्मा कारण थिएन। बोसो मान्छे सिमी संग meatless सलाद पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पकवान र अल्छी वा व्यस्त Housewives तयार उचित हुन सक्छ। यो पकवान तयार गर्न, तपाईं सिमी को एक गर्न सक्छन् आवश्यक हुनेछ। हामी सलाद लागि एक कप मा बदलाव र निम्न सामाग्री थप्न: पहिलो, तीन वा चार कटा अचार एक भद्दा grater उसिनेर अन्डा मा grated, त्यसपछि। खीरे को पकवान थप तीव्र संख्या बढ्यो गर्न सकिन्छ बनाउने। मरिच थप्न निम्न। यो अद्भुत सलाद देखिन्छ रातो सिमी र पहेंलो र हरियो मरिच। तपाईं सलाद सजाउनु केही मरिच सर्कल छोड्न आवश्यक छ। यो सबै सामाग्री, नुन र खट्टा क्रीम मिश्रण गर्न रहनेछ। मीठो मरिच र साग पात को स्लाइस - एक सेवा प्लेट प्रसार हरियो मा शीर्ष मा पालुङ्गो या सलाद, त्यसपछि सेम सलाद छोड्छ।
र यहाँ एक रोचक छ सिमी र पटाखे संग सलाद। एक कुनै पनि पटाखे, सिमी, दुई नुनीन वा ताजा खीरे, diced, ताजा जडीबुटी को एक गर्न सक्छन् पाउच लिनुहोस्। सबै घटक को चोट लसुन र मेयोनेज दाँत थप्न ध्यान मिश्रित छन्। केही मानिसहरू चाहनुहुन्छ जब croutons कमी। यसो गर्न, तिनीहरूले मात्र खुवाउने अघि थप्न आवश्यक, त्यसैले तिनीहरू नरम छैन।
पाहुनाहरूको लागि वास्तविक आश्चर्य बन्न सक्छ एक हट सलाद हरियो सिमी र काउली को। एक प्लेट मा तरकारी व्यवस्था, शीर्ष राख्नु thinly कटा टमाटर मा मेयोनेज को पातलो तह खन्याउन र कुनै पनि कठिन पनीर संग छिडकना। कि पछि, एक क्षण लागि पनीर, पनीर ढल्छ र अतिथि सेवा माइक्रोवेव मा पकवान राखे।
सरल व्यञ्जनहरु: फास्ट खाना सलाद
इतिहास Olivier सलाद। Olivier: फ्रान्सेली क्लासिक नुस्खा
अङ्गुर संग सलाद: विदेशी नजिक
झिंगा र पनीर संग एक सलाद कसरी तयार
सलाद "हिमशैल" संग सलाद कसरी तयार गर्न (व्यञ्जनहरु)
एलसीडी "एक गाउँ को ग्रीन सरहद," Ramenskoye: निर्माता, समीक्षा। मास्को क्षेत्रमा नयाँ भवन
किशोर समस्या र आफ्नो समाधान
सेप्टेम्बर 25 - राशिफल तुला। सुविधा र अनुकूलता
हाईयर (वातानुकूलित): समीक्षा, निर्देशन, निर्माता
एक बच्चाको लुगा पसल कसरी खोल्न?
छोराछोरी, महिला र पुरुष को लागि क्रिसमस उपहार विचार। एक मूल उपहार कसरी चयन गर्न
सेवई र पनीर
Berdyev Kurban Bekievich: जीवनी फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक
Dismorfobiya - खतरनाक ब्रेकडाउन
समुद्री शैली मा विवाह - नयाँ र रचनात्मक
कारणहरू र उपचार: को खुट्टा मा Dermatitis
रोजगार सम्झौता: संशोधनकारी लागि अनिवार्य मैदान को सम्झौता सर्तहरू र